१५५१.२३ विन्दुमा नेप्से, अरुण भ्याली हाइड्रोपावरको शेयरमूल्य १० प्रतिशतले वृद्धि (१ बजेको अपडेट)
भदौ २९, काठमाडौं । सोमवार नेप्से कारोबार भएको दोस्रो घण्टामा परिसूचक १३ दशमलव ९९ अंकले बढेको छ । कारोबार शुरु भएदेखि नै उकालो लागेको बजार कारोबारको यस अवधिमा शून्य दशमलव ९१ प्रतिशत बढेर १ हजार ५५१ दशमलव २३ विन्दुमा पुगेको छ ।
दोस्रो घण्टाको अवधिमा १८८ ओटा कम्पनीको २१ हजार ९२२ पटकको कारोबारमा ४२ लाख ८७ हजार ५०८ कित्ता शेयरको रू. १ अर्ब ४२ करोड ५६ लाख बराबरको शेयर खरीदविक्री भएको छ ।
यस अवधिसम्म नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको सर्वाधिक कारोबार भएको छ । उक्त कम्पनीको रू. ९ करोड ७७ लाख बराबरको शेयर कारोबार भएको छ । सो अवधिसम्म कम्पनीको शेयरमूल्य रू. ८९० मा कारोबार भइरहेको छ ।
कारोबार रकमकै आधारमा सर्वाधिक कारोबार हुने दोस्रो कम्पनीमा नेपाल बैंक रहेको छ । उक्त कम्पनीको प्रतिकित्ता रू. ३११ मा रू. ७ करोड २ लाख बराबरको शेयरको खरीदविक्री भएको छ ।
कारोबारको दोस्रो घण्टामा अरुण भ्याली हाइड्रोपावरको शेयरमूल्य सबैभन्दा बढी १० प्रतिशत वृद्धि भएको छ । त्यस्तै, एनआरएन लघुवित्तको शेयरमूल्य ९ दशमलव ९८ प्रतिशत, रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्सको शेयरमूल्य ९ दशमलव ९६ प्रतिशत र सिनर्जी पावरको शेयरमूल्य ९ दशमलव ९३ प्रतिशत बढेको छ ।
कारोबारको दोस्रो घण्टामा १२ समूहको परिसूचक कारोबारमा आएको छ । जसमध्ये बैंकिङ, व्यापार, विकास बैंक, होटल्स, जलविद्युत र वित्त, अन्य, बीमा, म्युचुअल फण्ड समूहको परिसूचक बढेको छ भने निर्जीवन बीमा, उत्पादन तथा प्रशोधन र लघुवित्त समूहको परिसूचक घटेको छ ।
१० % नगद लाभांश प्रस्तावसहित नेपाल ल्यूब आयलले बोलायो साधारण सभा [२०७७ असोज, १३]